Moosend: Atụmatụ Ahịa Azụmaahịa Niile Iji Wulite, Nwale, Sochie, ma Tolite Azụmaahịa Gị | Martech Zone
Otu akụkụ na-enye obi ụtọ nke ụlọ ọrụ m bụ ihe na-aga n'ihu na mbibi dị egwu maka ikpo okwu ịzụ ahịa ahịa ọkaibe. Ebe ulo ahia jiri otutu narị puku dollar (ma ka na-eme ya) maka nnukwu nyiwe… ugbu a, ugwo agbadatala nke oma ebe ihe oru a na-aga n’ihu imeziwanye.
N'oge na-adịbeghị anya, anyị na ụlọ ọrụ na-emezu ejiji na-arụ ọrụ nke dị njikere ịbịanye nkwekọrịta maka ikpo okwu nke ga-efu ha ihe karịrị ọkara nde dollar ma anyị dụrụ ha ọdụ ka ha mee ya. Ọ bụ ezie na ikpo okwu ahụ nwere atụmatụ ọ bụla nwere ike ịba, ikike mwekota, yana nkwado mba ụwa… azụmaahịa ahụ na-amalite, ọbụnadị enweghị akara, ọ na-ere naanị n'ime United States.
Ọ bụ ezie na ọ ga-abụrịrị oge nkwụsịtụ iji wulite azụmaahịa ha, anyị chọtara ha azịza na obere ego nke ego ga-ewe obere mbọ iji mejuputa. Nke a ga-enyere cashflow na azụmahịa, enyere ha aka ilekwasị anya na-ewu ha ika, na-enyere ha aka na-eto eto revenue revenue enweghị na-aga gbajiri. O doro anya na ndị na-achụ ego ha nwere ezigbo obi ụtọ.
Moosend: Email Marketing na Ahịa akpaaka
Maka azụmahịa azụmaahịa na-achọ itinye usoro nke ọgbọ, na-ewu ma na-ebipụta ozi ịntanetị, ma setịpụ ụfọdụ njem akpaaka ahịa, ma tụọ mmetụta… ị ga - ahụ ihe niile ịchọrọ Moosend.
Ikpo okwu na-abata na ọtụtụ narị ndị na-anabata, ndebiri ndebiri email yana akpaaka niile ịchọrọ ịmalite na awa karịa ọnwa.
Moosend: Dọrọ na dobe Email Nrụpụta
Moosend dị mfe iji dọrọ na dobe editọ na-enyere onye ọ bụla aka ịmepụta akwụkwọ akụkọ ọkachamara dị mma na ngwaọrụ ọ bụla, na ihe ọmụma HTML efu. Site na ọtụtụ narị ndebiri ndebiri iji họrọ, email ị na-akpọsa mkpọsa ga-eyi uwe ga-aga nke ọma.
Moosend: Ahịa akpaaka arụ ọrụ
Moosend -enyere gị aka ike pụrụ iche ahịa akpaaka workflows na ụgbọala akakabarede udu. Ha na-enye ọtụtụ ndị dị njikere Ezi ntụziaka ka malitere… gá »‹:
Njikere ndị ọrụ
Ebute Scoring akpaaka
VIP Nye Automations
Akpaaka ọ bụla na-enye ndị na-eweta, ọnọdụ, na omume iji wulite nrụpụta dịnụ ma ọ bụ rụpụta nke gị. Gị nwere ọtụtụ ọnọdụ na-akpali akpali, ozi ịntanetị ugboro ugboro, oge etiti oge, na / ma ọ bụ nkwupụta, tọọ ntọala steti, kesaa ọrụ ọrụ, tinye ndetu, jikọta ụzọ ma nyochaa stats na usoro ọrụ ọ bụla.
Chọgharịa Ezi ntụziaka Moosend
Moosend: Njikọ Ecommerce
Moosend nwere njikọ dị na Magento, WooCommerce, ThriveCart, PrestaShop, OpenCart, CS-Cart, na Zen Cart.
Wezuga ọkọlọtọ e-commerce dị ka agbahapụ ịzụ ahịa workflows, ha na-enyekwa ndụmọdụ gbasara ihu igwe, nkwanye ngwaahịa ahaziri iche, yana nkwanye ngwaahịa AI-chụpụrụ. I nwekwara ike kewaa ndị na-ege gị ntị site na iguzosi ike n'ihe ndị ahịa, ịzụta ikpeazụ, ike ịzụrụ, ma ọ bụ ike iji kupọns.
Moosend: Ibe akwukwo na ndi na-ewu ulo
Dị ka ọ dị na onye na-ewu email ha, Moosend na-enye ịdọrọ & dobe njikọ ọdịda peeji nke nwere ụdị niile na nsuso ị ga-atụ anya ime ka ihe dị mfe. Ma ọ bụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ itinye ụdị na saịtị nke gị, naanị wuo ma tinye ya.
Nwere ike inyocha ọganihu nke olile anya gị n'oge dị adị - nsuso mmeghe, pịa, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ndị na-edeghị aha.
Moosend: Nhazi nke data
Nhazi onwe ya bu otu n’ime okwu ndi eji eme ihe karia. Moosend keonwe ọ bụghị naanị imelite mpaghara ọdịnala n'ime ọdịnaya email, ị nwekwara ike iwekota ndụmọdụ ndị metụtara ihu igwe, ngwaahịa ndị ahaziri yana tinye ọgụgụ isi iji mee ihe site na ịtụ aro ngwaahịa dabere na omume ndị ọbịa gị niile na ohere ha ịzụta. Nkewa n'etiti Moosend gbatịrị gafere ozi ịntanetị, ibe ọdịda, na ụdị.
Moosend: Njikọ ọnụ
Moosend nwere oke siri ike API, na-enye ụdị ndenye aha WordPress, enwere ike iji ya site na SMTP, nwere ngwa mgbakwunye Zapier, yana ọtụtụ CMS ndị ọzọ, CRM, Ndepụta Ndepụta, Ecommerce, yana Njikọ Ọgbọ.
Debanye aha maka Moosend n'efu
Ngosi: Abụ m Mgbakwunye maka Moosend ma ana m eji njikọ njikọta na edemede a.
Tags: agbahapụ ịzụ ahịaakpaakaCS-Cartozi ịntanetị iguzosi ike n'ihedọrọ na dobe nchịkọta akụkọecommerce akpaakaahia ecommerceonye na-ewu emailemail Marketingemail ahịa ikpo okwuonye na-enye ọrụ emailespụdị onye na-ewu ụlọeditọ ibe editọmagentoakụrụngwa ahịaahia ahiaMoosendogherePrestaShopThriveCartwoocommerceworkflow Ezi ntụziakaZen Cart